Norway: Maxaabiista xukunada fudud oo xabsiga laga sii deyn karo. - NorSom News
Norway: Maxaabiista xukunada fudud oo xabsiga laga sii deyn karo.
Sida uu qoray wargeyska VG, hey´adda qaabilsan ilaalinta maxaabiista ayaa rabto in xabsiyada lasii daayo maxaabiista ku xukuman, xukunada fudud, kahor inta ay xukunkooda dhameysan. Taas oo looga danleeyahay in looga hortago faafitaanka caabua Corona-Virus.
Ilaa hada labo qof oo kamid ah ilaalida maxaabiista Norway, ayaa laga helay caabuqa Corona-virus. Iyada oo hey´adda ilaalada maxaabiistu ay sheegtay inay ka cabsi qabto inuu cudurku ku faafo xabsiyada Norway.
Wargeyska VG oo soo xiganayo hey´adda ilaalinta iyo xanaaneyta maxaabiista, ayaa sheegtay in maxaabiistan xabsiyada laga sii deyn doono, kahor inta aysan xukunkooda dhameysan:
-Dadka lagu xukumay wax ka yar 90 maalmood oo xabsi ah, ayaa xabsiga laga sii deyn doonaa 10 maalin kahor inta aysan xukunkaas dhameysan.
-Dadka lagu xukumay 90 maalmood oo xabsi ah ama ka badan, ayaa iyagana xabsiga laga sii deyn doonaa 20 maalmood kahor maalintii ay xakunka xabsiga dhameysan lahaayeen.
-Dadka lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah ama ka badan, ayaa iyagana xabsiga laga sii deyn doonaa 30 maalin kahor maalmood kahor maalintii loo qorsheeyay inay xabsiga ka baxaan.
Xigasho/kilde: Kriminalomsorgen: Vil løslate innsatte med kortere dommer.
Previous articleFHI: 33% dadka caabuqa Corona laga helay, waxey ka dhex qaadeen Norway gudaheeda.
Next articleNorwiijigii ugu horeeyay ee Corona-virus laga helay oo ka caafimaaday.